Ogaden News Agency (ONA) – Kulan Ay Yeesheen Faracyada JABSO Ee Gobolka Woqooyi Bari Kenya.
Kulan Ay Yeesheen Faracyada JABSO Ee Gobolka Woqooyi Bari Kenya.
Shalay oo Axad ahayd waxaa kulan balaadhan isugu yimid Gudiyada Faracyada Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee kadhisan Gaarissa, Xagardheere, Ifo iyo Dhagaxlay. Waxaana kulanka soo xaadiray gudiyada Faracyada deegaanadaas ka hawlgala.
Kulanka oo furmay subixii hore ee shalay ayaa kaqabsoomay xerada Ifo ee deegaanka Dhadhaab waxaana kulan dheer oo ay gudiyadu yeesheen kadib laga soo saaray bayaan ku aadan koox ay safaarada gumaysigu dhawaan kaga dhawaaqday magaalada Nairobi.
Bayaankan kasoo baxay gudiyada faracyada Gobolka Woqooyi Bari Kenya ayaa lagu sheegay in kooxda la magac baxday DAACO QUDHUN ee dhawaan gumaysigu uu kaga dhawaaqay Nairobi ay ahayd koox si dhaw loola socday dhaq dhaqaaqeeda isla markaana siwayn looga gaashaantay.
Sidoo kale bayaanka ayaa siwayn loogu taageeray bayaankii kasoo baxay xafiiska Jaaliyada JABSO kaas oo lagu qeexay kooxda DAACO QUDHUN iyo go’aamada laga qaatay, sidoo kale gudiyada ayaa soo dhaweeyay xubinkala noqoshada 8 kamid ah kooxda Daaco Qudhun ee safaarada wayaanuhu ay kudhawaaqday.
Bayaanka ayaa bulshada Soomaalida Ogadenia ee Gobolka Woqooyi Bari Kenya lagu amaanay sida ay durba dareenkooda umuujiyeen isla markaana ay u cambaareeyeen kooxda cusub ee DAACO QUDHUN.
Gudiyada ayaa Bayaankooda bulshada Soomaalida Ogadenia kaga cudsaday in ay ka digtoonaadaan dhamaan hagardaamooyinka gumaysiga isla markaana aan lagu soo galin qaab qabiil iyo qaab afmiinshaar nimo toona.
Bayaanka kasoo baxay gudiyada Faracyada Gobolka Woqooyi Bari Kenya ayaa kooxda DAACO QUDHUN looga digay in ay isku dayaan in ay yimaadaan ama soo dhex galaan bulshada Soomaalida Ogadenia ee kudhaqan Gobolka, waxaana kooxda loosheegay in Safaaradii wayaanaha aysan ku oolin Gobolka.
Sidoo kale bayaanka ayaa lagu xusay in ay kooxdu kufilantay isku dayo ay kudoonayeen in ay lasoo xidhiidhaan xubnaha Jaaliyada ee Gobolka Woqooyi Bari Kenya.
Guntii iyo gunaanadkii Bayaanka ayaa lagu sheegay in gumaysigu uu kufashilmay isku daygiisii ahaa in uu dhibaateeyo halganka xaga ah ee Soomaalida Ogadenia, waxayna gudiyadu bulshada ree Ogadenia kacodsadeen in ay gacmaha isqabsadaan isku meelna uga soo jeedsadaan kooxda daalan ee DAACO QUDHUN.
Gudiyada Faracyada Woqooyi Bari Kenya.